အကောင်သေးပေမယ့် ပိုအဆိပ်ပြင်းလာတဲ့ Razer Blade Stealth 2020
Gaming Ultrabook စံနှုန်းကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြန်တဲ့ Blade Stealth V4
Gaming Industry ဘက်မှာ Razer နာမည်နဲ့ မြင်ဖူး၊ တွေ့ဖူးနေကြ ထုတ်ကုန်တွေကို မဝယ်နိုင်သည့်တိုင်အောင် သဘောကျတယ်၊ လိုချင်စိတ်ကလေး ဘယ်သူမဆို ဖြစ်ကျမှာပါ။ မြွေစိမ်း ၃ ကောင် Logo ဆိုတာနဲ့ တပ်အပ်သိကျသလို ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အထူးအဆန်းလုပ်တတ်တာလည်း သူပါပဲလို့ ပြောရဦးမှာပါ။
အများသူဌာ လက်ခံထားကြတဲ့ Ultrabook ဆိုတာ ပေါ့ပါးမှုရှိပြီး အသင့်တင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်ဆိုင်ထားရမယ်၊ ဒုတိယက Battery ပေါ့ (အနည်းဆုံး ၆ နာရီအထက် အသုံးခံမှ တန်းဝင်ဖြစ်တာ ဆိုတော့) Luxury ထုတ်ကုန်တစ်ခု သို့မဟုတ် ကြွားလုံးထုတ်ဖို့ ဝယ်သုံးကျတဲ့ Product တမျိုးဆိုရမယ်ပေါ့။
Ultrabook ဖြစ်သွားရတာ ပါဝါအစားနည်းတဲ့ Chip ဥပမာ 15W Core i7 နဲ့ 45W Core i7 ပြောင်းသုံးထားသလိုပဲ Watts နည်းလေ Energy Drain လျော့သွားလေ ဖြစ်တဲ့အတွက် 45W Chip ကို TDP Reduce လုပ်သုံးမယ်ဆိုရင်ကော သီအိုရီအရ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား?
ကျနော့် အတွေးမြင်လေး ပြောကြည့်တာပါ။ တကယ်လို့ Core i7-9750H ကို 15W နဲ့ပဲ Run စေရင် Battery Life ကို မဆွဲဆန့်နိုင်ဘူးလား? တစ်ခုရှိတာက 15W ဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ ပြုတ်ကျသွားမှာဖြစ်ပေမယ့် အလုပ်လုပ်ဖို့တွက် အဆင်ပြေတယ်လေး (အပူထွက်လည်း နည်းသွားမယ်)
Image: Razer (via TheVerge)
လိုရင်းကိုပဲ ဆက်ရမယ်ဆိုရင် Ultrabook စံနှုန်းကို တစ်နှစ်တစ်နှစ် ရိုက်ချနေတာ Razer ပါ။ ၂၀၁၉ တုန်းက 13.3” Form Factor ထဲမှာ GTX 1650 (Max-Q) GPU နဲ့ Gaming Ultrabook ထလုပ်ခဲ့တာ စာဖတ်သူတွေ သိလိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။
Needs Better Cooling
Core i7-1065G7 (15W) Processor နဲ့ တွဲဖက်ထားတဲ့ Ultrabook ဟာ 13” အရွယ်စားဆိုပေမယ့် Gaming Grade GPU သုံးပေးထားတယ်။ တမျိုးစဥ်းစားကြည့်ရင် i7 နဲ့ GTX 1650 Chip နှစ်ခုကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့် Cooling Solution ရှိဖို့လိုပါတယ်။
အပူရှိနေရင် Performance ကျသွားတယ်ဆိုပေမယ့် Razer ရဲ့ Vapour Chamber Cooling က ကောင်းကောင်းအုပ်ပေးနိုင်တယ် ထင်ပါရဲ့။ Blade 15 Advanced မော်ဒယ်တွေမှာသာ ပါဝင်တဲ့ Cooling နည်းပညာက Competitors တွေနဲ့ယှဥ်လိုက်ရင် Thermal Handling ပိုကောင်းတယ်။
အထူးသဖြင့် Fan Noise နည်းသွားပြီး Internal Temperature လျော့သွားတဲ့အချက်က CPU ကို Turbo Frequency ကြာကြာထိန်းနိုင်စွမ်းအား ရှိသွားစေတယ်။ လက်ရှိ Rival ဖြစ်လာတဲ့သူ နောက်တနည်း ယှဥ်နိုင်သေးသူက ASUS ROG Series ပဲ ရှိသေးတယ်။
Vapour Chamber vs Liquid Metal
2020 ROG Zephyrus S Series ၊ ROG Scar Series နဲ့ Strix G Series တချို့မှာ Liquid Metal အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီး သီအိုရီအရ အပူချိန်ကို 10° ~ 20°C လျော့ပေးနိုင်မယ်လို့ ကြေညာထားတယ်။ ဒါဆိုရင် 15” Gaming Laptop တိုက်ပွဲမှာ ROG Series တွေ ဘယ်လို စွာလာဦးမလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်နေပါပြီ။
Zephyrus S15 with Liquid Metal Cooling Tech
Razer အကြောင်း ပြန်ဆက်ရရင် 13” Ultrabook တစ်လုံးအတွက် Thermal Handle လုပ်နိုင်လို့ GTX 1650 နဲ့ ထိုးရောင်းခဲ့တယ်။ Max-Q ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သာမန်ထက်တော့ Performance လျော့မယ်ပေါ့ ၊ တစ်ချက်ပဲ မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ရတာ i7-1065G7 က 25W မဟုတ်ဘဲ 15W နဲ့ပဲ သွား Run နေတဲ့အချက်ပါ။
Razer Blade Stealth V4
ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲ့တုန်းက ကြေညာခဲ့တဲ့ 13” Stealth ကိုမှ Iris Plus i7-1065G7 (25W) ကောင်ထက် Multi-thread Performance မှာ 20% လောက် သွားနည်းနေခဲ့တာပါ။ GTX 1650 (Max-Q) က 35W ပဲ သုံးစွဲပေမယ့် Benchmark တွေမှာ သူ့တာဝန်သူကျေပါတယ်။
ဒါကြောင့် 2020 မော်ဒယ်မှာ 15W Chip မသုံးတော့ဘဲ Full Potential စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့် i7-1065G7H (25W) Chip နဲ့ ကြေညာပေးလိုက်ပါတယ်။ Based Clock 1.3GHz ကနေ 3.9GHz Frequency အထိ Boost လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ i7 Chip အသစ်က Gaming အသုံးနှုန်းနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခုလို 25W Processor ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့အပြင် ပါဝါသုံးစွဲမှု ပိုများလာပြီး အပူပိုထွက်မယ့် အချက်နှစ်ချက်ရှိနေမယ်၊ ဒါမယ့် Cooling Solution က Ready ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ Review ထွက်လာရင် ပိုကြည့်ကောင်းပါမယ်။
with Stronger GPU
ဒီတခါ လေကြီးမိုးကြီး လုပ်နေတာ 2020 မော်ဒယ်မှာ GTX 1650 Ti (Max-Q) GPU သုံးထားတဲ့အချက်ပါ။ ပြောရရင် Gaming Laptop တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Entry GPU လည်းဖြစ်သလို eSports ဂိမ်းတချို့နဲ့ Less Demanding ဂိမ်းတွေကို Frame Rate များများနဲ့ Run နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
AAA ဂိမ်းတွေဆိုရင်တော့ Medium to High Setting နဲ့ ကစားနိုင်ပြီး 60fps Target နဲ့ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ အရင်နှစ် Stealth ရဲ့ GTX 1650 (Max-Q) ထက် 10% စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလာပြီး Razer ကြေညာထားတဲ့အတိုင်း GTX 1050 ထက် 80% ပိုမြန်လာမယ်။
GPU Database မွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါ 1,024 Cuda Cores ပါဝင်ပြီး 4GB VRAM ကို GDDR6 Speed (6,000 MHz) နဲ့ Run ပေးနိုင်ပါတယ်။ GPU Core Speed ကိုတော့ 1,035 ~ 1,200 MHz အတွင်း Operate လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Ultrabook Class အတွက် တော်တော်ကြီးကို Strong ဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
TGP အနေနဲ့ 35W သုံးစွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 13.3” Form Factor နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အနေထားရှိပါတယ်။ အခုလို CPU နဲ့ GPU စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် 2020 မော်ဒယ်ကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 120Hz Refresh Rate ပါဝင်လာတဲ့ Gaming Ultrabook လို့ ကြွေးကြော်လိုက်သလို အကောင်သေးသေးလေးနဲ့ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ Blade Stealth ဖြစ်လာစေတာပါ။
အလေးချိန်အနေနဲ့ 1.4kg ပဲ ရှိတာကြောင့် Mobility ပိုင်း အရမ်းမိုက်သလို 120Hz Screen ကြောင့် ဂိမ်မာတွေကို နှစ်ခြိုက်စေတယ်။ တကယ်လို့ Content Creation အတွက် သုံးချင်တယ်ဆိုရင် Corning Gorilla Glass3နဲ့ ဖုံးအုပ်ထားမယ့် 4K Panel ကို Optional အနေနဲ့ ရွေးလို့ရပါသေးတယ်။
Razer ကတော့ Panel နှစ်မျိုးလုံးကို 100% sRGB ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ ကြေညာထားပြီး Minor Changes အနေနဲ့ ပြောင်းလဲသွားတာက Keyboard Layout ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အထိ Arrow Keys နဲ့ Shift Key နေရာကို ကမှောက်ကမ သွားလို့ထားလို့ ပြောခံရတာ မနည်းပါဘူး။
မတော်တဆ မဟုတ်ရင်တောင် မှားမှားနှိပ်မိနေလို့ Blame ကြပါတယ်။ တစ်ခုရှိမှာက 13” Blade တွေမှာ Single Zone Backlight ပဲ သုံးလို့ရမှာပါ၊ နောက်ပြီးတော့ 15” Advanced တွေလို Optical Switch Keyboard ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခုလို အရည်ချင်းပြည့်ဝနေပြီဆိုမယ့် Small Size Gaming Laptop တိုက်ပွဲမှာ Zephyrus G14 နဲ့ ဘယ်လို Stack Up လုပ်နိုင်မလဲ မပြောတတ်သေးပါဘူး။ $1,400 တန် Ryzen Machine က Red Dead Redemption2လို ဂိမ်းမျိုးကို High Setting နဲ့ ကစားနိုင်တဲ့အထိ စွာနေသလို i9-9980HK ကို အနိုင်ယူထားတဲ့အထိ Multi-thread Performance မှာ အားကောင်းနေတဲ့ Laptop ဖြစ်နေတာပါ။
Blade Stealth vs Zephyrus G14
Razer ကတော့ 13.3” Blade Stealth V4 (2020) ကို $1,800 နဲ့ ရောင်းချနေပြီး စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ဆိုရင်ကော အကောင်သေးသေးလေးနဲ့ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ Razer ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ? Luxury လုံးလုံးဖြစ်နေပေမယ့် RTX 2060 Max-Q သုံးထားတဲ့ Zephyrus G14 ကို လုံးဝမေ့ထားလို့ မရပြန်ဘူး။
အပူနဲ့ ပါဝါအစားများတဲ့ အချက်ကလွဲလို့ Top-notch Performer ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Price-to-performance မစဥ်းစားရင် ဘာရွေးမလဲ?
Razer Blade Stealth v4 Official Homepage
Source: The Verge ၊ Venture Beat
CES 2020 မှာ MSI ကြေညာလိုက်တဲ့ Gaming Laptop များ
ASUS မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ 2020 ROG Gaming Laptop များ
HUAWEI P40 Series ရဲ့ အနုပညာမြောက် Quad-curve Overflow Display နည်းပညာအကြောင်း ဖော်ပြချက်
Google Stadia Support ရလာပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 8 Series